ငါသာလျှင် ငါ့ဘလော့ဂ်ရဲ့ အရှင်သခင်: 2008/11
sexy leg, the way i dress and noodle :)
ဆက်(စ်)စီ ဖြစ်တဲ့ခြေထောက်ပုံ ကြည့်ပါဦး။ ကျနော့်ခြေထောက်တော့ မဟုတ်ဘူး။
ဝက်ဝက်ကွဲ အောင်မြင်မလားလို့ ဒီပို့စ်ကို တင်ကြည့်တာ။း)
ဆက်(စ်)စီ အဲ - စက်ဆီတွေ ပေသွားတဲ့ ခြေထောက်ပုံဗျာ။း) ဆက်စီဖြစ်တိုင်း ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိအောင် share လုပ်လိုက်တာပါ။ အင်တာနက်ထဲ surf လုပ်ရင်း ကောက်ရတဲ့ပုံ။
အောက်ပုံကတော့ ကျနော့် t-shirt ကို ပြချင်လို့ တင်လိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံ ဆိုပါစို့။ ခေတ်ပြိုင်ကနေ မေတ္တာလက်ဆောင် ရတာ။း)နယ်စပ်မှာတုန်းကတော့ ဒီလို t-shirt တွေနဲ့ပါပဲ။ ခွေးကတော့ ကျနော့်ခွေးမဟုတ်ဘူး။ ကျနော့်ခွေးတွေလိုပဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ခွေးတကောင်။
အလကားရတဲ့ gift တွေပဲ ၀တ်တဲ့ကောင်ဆိုပြီး အထင်မကြီးမှာစိုးလို့ ပုံတချို့ တင်ပေးလိုက်ဦးမယ်။ ကြည့်ပါဦး takealook at ကျနော့် အင်္ကျီတွေ။ ၀ယ်ဝတ်တာတွေပါ။ believe me.
ဟောသမှာ - ဒီ အပေါ်က အနွေးထည်က နှယ်နှယ်ရရ မဟုတ်။ ဈေးကြီးတယ်။ dollar ငါးဆယ်နဲ့တရာကြားမှာ ရှိမယ်။ shirt အင်္ကျီကလည်း foreign က လာတာမို့ price မသေးဘူး။
how much ဘယ်လောက်ပေးရသလဲ ဆိုတော့၊ Um - - နေဦး၊ ကျနော်က အဟောင်းဆိုင်က၀ယ်တာမို့ အဲသလောက် ဘယ်ပေးရမလဲ။ ပြီးတော့ ဒီလို good second hand တွေရောင်းတဲ့ အဟောင်းဆိုင်တွေဆိုတာ တပတ်တခါ onceaweek ဆိုသလို half price ဈေးထက်ဝက်ချတဲ့နေ့ရှိတော့ အဲဒီနေ့မှာ ၀ယ်ဖြစ်တဲ့အင်္ကျီတွေပါ။း) တတိယနိုင်ငံတွေမှာလည်း အဟောင်းဆိုင်တွေက everywhere မို့ ကိုယ့်အတွက်က okay နေတာပဲ။
ဒီပုံမှာ လေဘေးအင်္ကျီနဲ့ လေဘေးဘောင်းဘီဝတ်ထားတာ တွေ့ရမယ်။ ဒုတိယနိုင်ငံ ယိုးဒယားမှာ ရိုက်ထားတာ။ လေဘေးစတိုင်ပေါ့ဗျာ။ No! လေတပ်ကရဲဘော်စတိုင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလောက်ကတော့ everybody knows ပါနော်။ ဖိနပ်တွေကတော့ ပွဲတက်ဖိနပ်တွေ မဟုတ်ပေမယ့် ယိုးဒယားမှာတော့ အဲဒါတွေပဲ ၀တ်ကြတာပဲ။
အောက်က နှစ်ပုံကတော့ ကျနော့်ပုံတွေ မဟုတ်ဘူး။
ဒီပုံကို ဆန်ခေါက်ဆွဲ၏သမိုင်းအစ လို့ ကျနော်ကတော့ နာမည်ပေးချင်တယ်။ လယ်ထွန်မယ်၊ ကောက်စိုက်မယ်၊ မှည့်လာရင် စပါးရိတ်မယ်၊ အဲဒီစပါးက ဆန်စက်ကနေပြန်ထွက်လာတော့ ဆန်ဘ၀ကိုရောက်မယ်၊ ဆန် ဆိုတော့ ဆန်ခေါက်ဆွဲဖြစ်ဖို့ အဆင့်က နီးနေပြီ။
နာမည်တပ်မယ်ဆိုရင် ဒီပုံက ခေါက်ဆွဲစားသူ လို့ အမည်ပေးသင့်တဲ့ပုံ။ ဒီကောင်ကြီးကလည်း ကျနော့်ကောင် မဟုတ်။ ၀က်ဆိုက်တခုမှာ တွေ့တာ။ မစားချင်တာတွေ ခဲထားရလို့ စိတ်ညစ်နေပုံရ။
that's it! ဒါပါပဲဗျာ။ တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင် ခွင့်မလွတ်ပါနဲ့။ don't forgive me နော်။ တချို့ blogger တွေက အင်္ကျီပုံတွေ၊ ခေါက်ဆွဲပုံတွေနဲ့ ၀က်ဝက်ကွဲ အောင်မြင်နေတော့ ကိုယ်လည်း လိုက်လုပ်ကြည့် copy ကူးတဲ့သဘော။ လူဆိုတာ၊ human being ဆိုတာ အောင်မြင်ချင်၊ အထင်ကြီးခံရချင်တယ်လေဗျာ။ အထင်ကြီးတော်မူကြပါဦး။
အခုလို လာဖတ်တဲ့အတွက် တကယ့်ကို thank you so much ပါပဲ။
guru passes away :(
ဂုရု ဆုံးသွားပြီ တဲ့။ သတင်းတွေ ၀င်လာတယ်။ သူနဲ့ကျနော် စတွေ့တော့ ၂၀၀၁ တုန်းက။ မဲ့ခေါင်ခဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာ။ အဲဒီစခန်းနဲ့ ဖာပွန်(ကရင်ပြည်နယ်)၊ ဖားဆောင်(ကယားပြည်နယ်) တို့က သုံးပွင့်ဆိုင်။ သူတို့က ရောင်နီဦး ဆိုတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းတခု ဖွင့်ထားတယ်။ သူတို့စီစဉ်တဲ့ စာပေဟောပြောပွဲမှာ ကျနော်နဲ့ ကိုထိန်လင်း ၂ ယောက်ကို ဟောပေးဖို့ ဖိတ်တယ်။ (အခု ကျနော်တို့ ၂ယောက်က မိုးမခ ရောက်နေတယ်။)
ဟောပြောပွဲမှာတော့ လူအစုံပဲ။ ရောင်နီဦးကျောင်း သူငယ်တန်းကနေ ဆယ်တန်းအထိ ကျောင်းသားတွေ၊ ပြီးတော့ စခန်းထဲက အသက်အရွယ်ပေါင်းစုံ ဒုက္ခသည်တွေ။ စာမတတ်သူတွေလည်း ပါနိုင်တယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စာမဖတ်သူတွေလည်း ပါနိုင်တယ်။ ဒုက္ခသည်စခန်း ဆိုတာ ပွဲလန်းသဘင်မရှိတဲ့အရပ်ဖြစ်တော့ အဲဒီပွဲက ပရိသတ်အင်အား ကောင်းတယ်။ ရပ်ကွက် ၁၃ က တတဲတယောက် အနည်းဆုံး အားပေးကြမယ် ထင်တယ်။ အဲဒီရပ်ကွက်က ကရင် နည်းပြီး ဗမာ များပုံရတယ်။ တခြားရပ်ကွက်တွေက လာချင်မှ လာမယ်။ ည ၈ နာရီကျော်ရင် စခန်းထဲမှာ ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်သွားခွင့် မပြုဘူး။ ကျနော့်ကို အရင်ဆုံး စင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုထိန်လင်း။ နောက်တော့ ဂုရုတို့ တက်ပြီး ကဗျာရွတ်ကြတယ်။
ကျနော်ကတော့ ရယ်စရာတွေ ပြောလိုက်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ပရိသတ်အားလုံး သဘောကျအောင်တော့ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဂုရုတို့ ကဗျာရွက်တာလည်း ပရိသတ်က လက်ခုပ်တီး အားပေးတာပါပဲ။ စင်ပေါ်ကဆင်းတော့မှာမို့ ၀မ်းသာအားရ လက်ခုပ်တီးတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊ အခမ်းအနားအစီအစဉ်တခု အပြီး ယဉ်ကျေးမှုအရ တီးတဲ့လက်ခုပ်သံတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊ လေးလေးစားစား လက်ခုပ်တီးကြသူတွေလည်း ရှိမယ်။ ဂုရုကတော့ အလေးအနက် ထားတဲ့အပြင် တကယ်ကို ရင်ခုန်မှုအပြည့် ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ကဗျာရွတ်တာပဲ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း သူတို့တွေ့တွေ့နေတဲ့ မျက်မှန်နဲ့ ဒီဆရာ (တော်လှန်ရေးသမား)က စာတွေပေတွေလည်း ရသားပဲ လို့ အသိအမှတ် ပြုသွားကြပုံပေါ်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ လလောက်တုန်းက သူ့ကို နောက်ဆုံးတွေ့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း လက်ထဲမှာ ဆေးပေါ့လိပ်နဲ့။ ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ဒီနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ သူတို့ လုပ်ကြတယ်။ စင်ဘေးမှာ ကဗျာရွတ်သံတွေကို အထောက်အကူပြုနေတဲ့ ဂစ်တာသမားတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီထဲကတယောက်ကို လက်ညိုးထိုးပြပြီး သူ့ညီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောပြတယ်။ ဂုရုက အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာတောင် သိပ်မကြာသေးဘူး။ သူ့အသက် သိပ်မငယ်တော့ဘူး ဆိုပေမယ့် ၃ဂ နှစ်ဆိုတာ လောကကြီးထဲကနေ ထွက်သွားဖို့ စောလွန်းပါသေးတယ်။ သူရေးချင်တာတွေကို အကုန်မဟုတ်ပေမယ့် အတော်များများကို ဘလော့ဂ်တခု တည်ဆောက်ပြီး ရေးခဲ့နိုင်တာကိုတော့ သူကျေနပ်သွားမယ် ထင်ပါတယ်။ ။
literary talk in SF
မိုးမခဘလော့ဂ်အတွက် စီစဉ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံသတင်း။ မစ္စတာမောင်ရစ်က လက်ဦးသွားတော့ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။း)
ဆန်ဖရန်စစ္စကို စာပေဟောပြောပွဲ၊ စာရေးဆရာ ၅ ဦး တက်ရောက်
အမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပေးနေသော မာမာအေး၊ စာရေးဆရာတို့၏လက်မှတ်များ ရယူနေသူအမျိုးသမီးနှစ်ဦး
စာပေဟောပြောပွဲတွင် တွေ့ရသော မြန်မာပြည်သားလူငယ်တို့၏ နံရံကပ်စာစောင် လက်စွမ်းပြချက်
cartoonist Oliver Gaspirtz
ဒီကာတွန်းက သိပ်ကောင်းတာပဲ။ ကာတွန်းဆရာက အိုလီဗာဂက်စ်ပဇ်၊ Oliver Gaspirtz, November 1970 ဂျာမနီမှာမွေးတယ်ဆိုတော့ ကျနော့်ထက် လပိုင်းပဲ စောတာပဲ။ အလုပ်အကိုင် - ၀က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်နာ။ အသက် ၂၃ နှစ်မှာ နယူးယောက်ကို ပြောင်းသွားတယ်။ အဲဒီက ဂျာမန်ဘာသာ သတင်းစာတစောင်မှာ art director။ အဲဒီနှစ်မှာပဲ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးစာအုပ် The Truth About Cinderalla ကို ထုတ်တယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စာအုပ်ဂျာနယ်အသွယ်သွယ်က သူ့ကာတွန်းတွေ ယူသုံးကြတယ်။
နောက်ပိုင်း Germany, England, Turkey, Iran, and the United States တို့မှာလည်း ကာတွန်းစာအုပ်တွေ ထပ်ထုတ်တယ်။
အောက်ကို ဆင်းခဲ့စမ်း။ အိမ်နီးချင်းတွေ ၀ိုင်းကြည့်ကုန်ပြီ။
ဒီကာတွန်းကလည်း လူရွှင်တော်တွေကို နှိပ်ထားတာပဲ။ ကာတွန်းခေါင်းစဉ် က surprise! ဆိုပဲ။ အင်္ဂလိပ်တွေက အံ့သြစရာတခုခုလုပ်ပြပြီး surprise! လို့ အော်တတ်ကြ ပျော်တတ်ကြတယ်ဆိုတာကို သိထားရင် ဒီကာတွန်းက ပိုရယ်ရမယ်။
ပုံအောက်ကစာကို နားလည်မယ်၊ ပြီးတော့ တယ်လီဖုန်းတွေ ဂျီတော့ တွေ သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကာတွန်းကို သဘောကျမှာပါ။ “လူကြီးမင်း ဆက်သွယ်သည့် ၀ိဥာဉ်ကို ခေါ်ဆို၍ မရနိုင်ပါ။ ပြောစရာရှိတာ ပြောထားခဲ့နိုင်ပါတယ်” တဲ့။
အထင်ကရ ကမ္ဘာ့ကာတွန်းပြပွဲ ၂၀ ကျော်မှာ သူ့လက်ရာတွေ ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ Bubble ဆိုတဲ့ ဂိမ်းကိုလည်း ထွင်ခဲ့ပါသတဲ့။
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ၀က်ကလေး သုံးကောင်ရှိသတဲ့။ အဲဒါနဲ့ ငါ သူတို့ကို စားလိုက်တယ်။ ပုံပြင်ကတော့ ဒါပဲ။ ကဲ - - အိပ်တော့၊ အိပ်တော့။
ဒါပါပဲဗျာ။ ကာတွန်းဆရာ သူ့ခွေး၂ကောင်နဲ့ ပီကေအတူတူစားတဲ့ ၄မိနစ်ကျော် ဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါဦး။ funny! :D
Women of the World Award အကြောင်း ကျွန်ုပ်ရေးခဲ့စဥ...